Crypto Market က၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် 2018 - Blockchain သတင်းများ
ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ယုံကြည် 2018, ကျနော်တို့အစိုးရများ ICO စျေးကွက်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်မည်ကိုမြျှောလငျ့နိုငျ, cryptocurrency ဖလှယ်မှု, နှင့်ကုန်သည်များ. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကမ္ဘာ၏အဓိကဗဟိုဘဏ် cryptocurrency အလားအလာ-in ကိုတန်ဖိုးထားအထူးသဖြင့်, Bitcoin-နှင့်လာမည့်နှစ်တွင်ပြုလုပ်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. ကျနော်တို့ crypto စျေးကွက်ဆီသို့အမျိုးမျိုးသောဘဏ္ဍာရေးအလောင်းတွေ၏ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတံ့သောအရာကိုလမ်းညွန်အတွက်လေ့လာခဲ့ကြ 2018.
ဤနှစ်တွင်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ငွေကြေးအာဏာပိုင်များ ICO စည်းမျဉ်းမိတ်ဆက်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်၏ဤလမ်းဆီသို့မိမိတို့၏သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ. ဒါကြောင့်, တရုတ်နှင့်တောင်ကိုရီးယားကိုတရားဝင်၎င်းတို့၏နယ်မြေများအပေါ်ကျင်းပခဲ့သော ICO ပိတ်ပင်ထား. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, ယူအက်စ်အေ, ကနေဒါ, ဆွစ်ဇာလန်, ဂျပန်, စင်္ကာပူ, နှင့် U.A.E. တရားဝင် ICO ခွင့်အများအပြားဆုံးဖြတ်ချက်များထုတ်ပေး, ICO ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းအာဏာပိုင်များစည်းမျဉ်းအကြောင်းမဲ့ခံနှင့်အတူ. ထုတ်ပေးတိုကင်တည်ဆဲဥပဒေအောက်မှာလဲကြစေခြင်းငှါ, ဥပမာ, interfund အရောင်းအထိန်းညှိတ. ဂျယ်ရီ Brito အဆိုအရ, အဆိုပါအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကအကြွေစေ့-စင်တာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ, အစိုးရများအမေရိကန်စံနမူနာနှင့်လက္ခဏာသက်သေရောင်းအားကိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ် 2018. USA တွင်, တစ်ဦး ICO အချို့တိကျသောတိုကင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအောက်တွင်အာမခံထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်. စတီဖင် Obie, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Jones ကနေ့မှာအဖော်, အလားတူစိတ်ကူးဖော်ပြ:
“ငါဆက်ဆက်ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် SEC သည့် Token ဈေး၌ငါအပ်မည်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းလုပ်ရပ်များနှင့်အခြားလမ်းညွှန်မှုမှတဆင့်အကြောင်းကိုလာကြလိမ့်မည်ထင်. အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကဒီစျေးကွက်အကြောင်းကိုသိတယ်နဲ့အလေးအနက်ထားကကြာပါတယ်။”
ကျွမ်းကျင်သူများက ICO အလားတူလုပ်ရပ်များ cryptocurrency ၏လေးစားမှုအတွက်သိမ်းယူလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်, အထူးသဖြင့်, Bitcoin. dmitriy Zhulin, INS ဂေဟစနစ်၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, ဤပြဿနာကိုအပေါ်သို့ကျိန်းဝပ်:
“Bitcoin ခုလုံးမဲမှောငျအဖြစ်, စည်းမျဉ်းပထမဦးဆုံး ICOs ဘောင်ပြီးတော့ cryptocurrencies မှပေါ်ရွှေ့မည်, သို့သော်, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးရလဒ်ရလိမ့်မည်ဆိုပါကယခုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်. အဆိုပါ crypto အာကာသအတွင်းစည်းမျဉ်းတစ်ခုတိုးလာနေသော်လည်း, ငါနည်းပညာအဖြစ် blockchain မိုးသည်းထန်စွာစည်းမျဉ်းများကနှောင့်နှေးမညျမဟုတျဟုယုံကြည်ကြသည်။”
Bitcoin ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပြီးသားနိုင်ငံများရှိပိတ်ပင်ထားကြသည်, ထိုကဲ့သို့သောဘိုလီးဗီးယားအဖြစ်, အီကွေဒေါနိုင်ငံ, အိန္ဒိယ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, အိုက်စလန်, ကာဂျစ္စတန်, မော်ရိုကို, နီပေါ, မလေးရှား, အင်ဒိုနီးရှား, နှင့်ထိုင်ဝမ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, တရုတ်နိုင်ငံ, ဒါကြောင့်ဒေသခံ cryptocurrency ဖလှယ်မှုအပေါ်ကုန်သွယ်မှုပိတ်ပင်ထားသည်အဘယ်မှာရှိ, နှင့်ရုရှား cryptocurrency စည်းမျဉ်း၏ဥပဒေကြမ်းများပြင်ဆင်နေကြသည်, အတွင်းအင်အားစုသို့ရောက်နိုင်သည့် 2018. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုမှအကျိုးအမြတ်အစီရင်ခံရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် (IRS ကို) နှင့်သတိပြုပါသည်နှင့်အညီအခွန်ပေးဆောင် 2014-21.
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, ဗြိတိန်နှင့်အီးယူဘဏ္ဍာရေးအားပြိုင်မှုကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ cryptocurrency ရာအောကျဥပဒလွန်သွားဖို့စီစဉ်အကြောင်းကိုကြေညာ, အချို့ကိစ္စများတွင်, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု, နှင့် cryptocurrency ဖလှယ်မှုအသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူအာဏာပိုင်များများကိုရှိသည်မယ်လို့. ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးအလောင်းတွေအရ, ဤအအစီအမံပိုက်ဆံ-ခဝါချမှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒငွေကြေးကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်သောများမှာ. ဤပြဿနာဆီသို့ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏သဟဇာတအစောပိုင်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည် 2018, နှင့်ပညတ္တိကျမ်းလာမယ့်နှစ်ကုန်အားဖြင့်အင်အားသုံးသို့ရောက်ရလိမ့်မည်.
G7 ဗဟိုဘဏ်နှင့် cryptocurrency
တိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များအားဖြင့် crypto စျေးကွက်စည်းမျဉ်းများအားဖြည့်ညွှန်ပြ. အားပြိုင်မှု, သို့သော်, အဖြစ်ကောင်းစွာ cryptocurrency အတွက်အလားအလာတွေ့မြင်. တွင် 2018, G7 ဗဟိုဘဏ်တွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးသိုက်အားကောင်းရန် cryptocurrencies ဝယ်ယူစတင်မည်. အဆိုပါ Bitcoin ဈေးကွက်အရင်းအနှီးအားလုံး SDR ၏တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ G7 ဗဟိုဘဏ်များအတွက်တစ်ဦးကအလှညျ့အပွောငျးဖွစျလိမျ့မညျ (အထူးဆွဲအခွင့်အရေးများ). ဒါဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ငံတကာအရံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် (IMF က) ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြည့်စွက်ရန်’ တာဝန်ရှိသူတဦးကသိုက်. Bitcoin အရင်းအနှီး, ဥပမာ, ရှိပြီးသား SDR ၏တန်ဖိုးကျော်လွန်နေပါသည် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $291 ဘီလီယံအထိ).
နောက်ထပ် Tipping အမှတ် G7 ငွေကြေးများ၏တန်ဖိုးများကို cryptocurrencies ဆန့်ကျင် devaluing ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်. တွင် 2018, ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်အရင်းအနှီးများကအထင်ရှားဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးဖြစ်လာ Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrencies သက်သေခံပါလိမ့်မယ်, ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ.
အမျိုးသားရေးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, နိုင်ငံအများအပြားပင် blockchain သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးငွေကြေးဘာသာပြန်ဆိုဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်. ဂျင်မ် Angleton, Aegis FinServ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ, ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးထုတ်လုပ်နိုင်ငံများတွင်အရေအတွက်ကသာကြီးထွားမည်ကိုသေချာဖြစ်ပါသည်:
“ကျနော်တို့ကဒီနေ့ခေတ်ကိုသိရ 108 နိုင်ငံပေါင်းသူတို့ရဲ့စက္ကူငွေကြေးဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ဦး $ D ကိုအပေါ်သို့မှီခိုမထွက်၏မျက်နှာသာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးထုတ်ပေးနှင့်အတူစမ်းသပ်နေကြသည်. ကြှနျုပျတို့ယုံကွညျသညျ 20+ နိုင်ငံများကသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်များဆီသို့ဦးတည် Beta ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။”
ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလ, ကျနော်တို့ရုရှားက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားရေးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအရမယ်ဆိုတာသင်သိရဆီသို့ရောက် လာ. ,, cryptoruble. အစိုးရအရုရှားတွင် cryptoruble ၏ထုတ်ပေးရေးနှင့်စောင်ရေထိန်းချုပ်ယူပါလိမ့်မယ်, cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာအတူ. လည်း, ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ Nicolas Maduro အနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်, အရာနှင့်အညီအမျိုးသားရေး cryptocurrency အယ်လ် Petro ၏ပစ်လွှတ်နောက်နှစ်အတွက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. ဗင်နီဇွဲလားသဘာဝသယံဇာတစတော့ရှယ်ယာ, ထိုကဲ့သို့သောရွှေကဲ့သို့, ဆီ, စိန်, အယ်လ် Petro back မယ်လို့.
အဆိုပါ ICO နှင့် crypto ကုန်သွယ်တရားဝင်တရုတ်တွင်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအမျိုးသားရေးငွေကြေး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုစမ်းသပ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးတိုင်းပြည်ခဲ့. Yao အဘိဓါန် Qian, တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ဦးခေါင်းကို, ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသား cryptocurrency ထုတ်ပေးရမည်ဟုဖော်ပြထား.
ဒီဇင်ဘာလ၌အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ဗဟိုဘဏ်တွေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ငွေပေးချေမှုများအတွက်ရှေ့ပြေးပဏာမခြေလှမ်းစတင်. ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားရဲ့ဗဟိုဘဏ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, cryptocurrency အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ပြန်ချက်များရှိခဲ့သည်ရှေ့မှာပေးထား, crypto စျေးကွက်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးအားပြိုင်မှုများက blockchain. အဆိုပါ U.A.E., ယင်း၏အလှည့်အတွက်, ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍ blockchain စီမံကိန်းများကိုတစ်အရေအတွက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒူဘိုင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Blockchain ကောင်စီသူတို့ထဲကအတော်များများတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်.
Crypto Market က၏စည်းမျဉ်း
ဇန္နဝါရီလ 18, 2018 admin
သငျသညျ crypto-ငွေကြေးနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးမွှုပျနှံခဲ့လျှင်, then
ဇန္နဝါရီလ 17, 2018 admin
အားလုံး Cryptocurrencies 18 ဇန္နဝါရီလ 2018 Nr Name Symbol 1 Bitcoin BTC 2